ဘုန်းကျော်: 06/01/2012 - 07/01/2012
တရုတ်အစိုးရပိုင် ဂလိုဘယ်တိုင်းစ် ဆိုတဲ့ အွန်လိုင်းသတင်းစာမှာရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးကို ရှယ်ချင်ပါတယ်။ ဆောင်းပါးရေးသူက သူရဲ့ အမြင်ကို တင်ပြထားတာပါ။ သူကတော့ အကြီးတန်းအယ်ဒီတာတစ်ဦးဆိုတော့ တရုတ်အစိုးရရဲ့ မြန်မာပြည်နဲ့ ပက်သက်တဲ့မှုဝါဒကို တင်ပြသလိုပါပဲ။
- ဒေါ်စုရဲ့ ဥရောပခရီးစဉ်ဟာ အနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ အောင်မြင်မှု ဖြစ်တယ်။ မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုမဟုတ်ပါ။
- ဒေါ်စုဟာ ကုလားအရေးနဲ့ ကချင်အရေးမှာ ပါဝင်မှုနည်းသလို အခြားတိုင်းရင်းသားအရေးမှာလည်း ပါဝင်မှု အားမကောင်းပါ။
- ဒီမိုကရေစီကို အရမ်းပေးရင် တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်း ပိုလို့ တောင် သတ်နိုင်တယ်။ ဆိုလိုတာက စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုပဲ သူတို့ ကြိုက်ပုံရတယ်။
- ရိုဟင်ဂျာအရေးကို တရုတ်အစိုးရက တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပုံရတယ်။ (ကျနော့်အမြင်)
- ဆောင်းပါးတစ်ခုလုံးကိုခြုံပြီး တစ်လုံးတည်း ပြောရမယ်ဆိုရင် တရုတ်အစိုးရက လက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့ အပြောင်းအလဲကို အထူးမလိုလားသလိုပဲ။
- ဒါ့ကြောင့် ပြည်တွင်းဗီးနပ်စ်ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်ဒီတာ့အာဘော်မှာတောင် ဒီဆောင်းပါးနဲ့ ပက်သက်ပြီး အတိအလင်း ကန့် ကွက်နေတယ်။
- တရုတ်အစိုးရဟာ မြစ်ဆုံဆည်အရေးနဲ့ ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ အတော်လေးစိတ်ထိခိုက်သွားပုံရတယ်။ သူ တို့ အကျိုးအမြတ် ဆုံးရှုံးမှာကိုမလိုလားဘူး။ ပြည်တွင်းထဲက တရုတ်လူမျိူးအရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီးလည်း တွေးပြီးကြောက်နေပုံရတယ်။
- ဒါ့ကြောင့် လက်ရှိဦးသိန်းစိန်ရဲ့ ပြုပြင်ပြောင်လဲမှု့ ကို တရုတ်အစိုးရက လုံးဝကို မနှစ်မြို့ တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီဆောင်းပါးက သက်သေပြနေတယ်။
- တရုတ်ပြည်ဟာ မြန်မာပြည်ကို သူတို့ ရဲ့ ပြည်နယ်တစ်ခုအဖြစ် သတ်မှတ်ပြီးဆက်ဆံလာတာ ကြာပြီ။
-ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို လက်သက်မွေးတယ်။ မဟန်တော့ စစ်အစိုးရနဲ့ ပေါင်းပြီး တိုင်းပြည်ရဲ့ သယံဇာတကို ဂုတ်သွေးစုတ်တယ်။ အခုလက်ရှိ ဒီမိုကရေစီအရေးမှာလည်း တရုတ်အစိုးရက ကန့် လန့် သွားမဲ့ပုံပေါက်နေတဲ့အတွက် မြန်မာတွေ သတိရှိဖို့ လိုကြောင်း အသိပေးချင်တယ်။
- နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးမှာ စကားကြီးတစ်ခုရှိတယ်။ ဒါကတော့အမြဲတမ်း မိတ်ဆွေမရှိဘူး။ အမြဲတမ်းအကျိူးစီးပွားပဲရှိတယ်။ ဒီစကားနဲ့ ပက်သက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ရင် ငတ်ပြတ်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေအရေးကို ကူညီဖို့ ထက် သူတို့ အမြတ်ရဖို့ က အဓိကဖြစ်တယ်။
- ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေဟာ ဘယ်တော့မှ မြန်မာပြည်က ဒုက္ခသည်တွေ လက်ခံခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။ လစ်ဘရယ်နိုင်ငံတွေကသာလျှင် လက်ခံခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။
- ကွန်မြူနစ်က လစ်ဘရယ်ကိုကြည့်မရတဲ့ အချိန်မှာ မြန်မာပြည်က ကြားညှပ်သွားခဲ့နှစ်က နည်းတာမဟုတ်ဘူး။
- ဒီအခြေအနေကနေ ဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဘက်ပေါင်းစုံက နိုင်ငံရေးအင်အားစု တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေ အမြန်ဆုံးရုန်းထွက်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်တယ်။
- တရုတ်လူမျိူးတွေကို ဆန့် ကျင်ဖို့ ဒီစာဖြန့် တာမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်အစိုးရရဲ့ လုပ်ရပ်ကိုသာဆန့် ကျင်တာဖြစ်တယ်။
Democracy no panacea for Myanmar's woes
Myanmar's opposition leader Aung San Suu Kyi finally accepted the Nobel Peace Prize, which she won in 1991, and deliveredalong-overdue speech in Norway on Saturday. The heads of some European countries also met with her, and held state-level receptions for her.
The enthusiasm of these European leaders is more likeademonstration of their "victory," rather than hospitality for Suu Kyi. Suu Kyi belongs to Myanmar, but she belongs more to Europe. In the eyes of these European leaders, without the political and economic pressure they helped exert, Myanmar wouldn't have witnessed the changes it's undergoing today.
However, at this stage, what most deserves attention is probably not Suu Kyi, but the complex ethnic and religious conflict taking place in Myanmar's Rakhine state, and the tens of thousands of stateless Rohingya refugees who live there.
After the clash between the Muslim Rohingya and the Buddhist Rakhine people, some Muslims in Rangoon visited Suu Kyi, in the hope of getting suggestions from Suu Kyi and her National League for Democracy (NLD) party. But Suu Kyi didn't seem to haveasolution either. She briefly talked with them, and asked them to turn to the government to get the problem solved.
The violent conflict in the Rakhine state disclosed again the soft spot of Myanmar, its ethnic conflicts. This is directly related to the legacy of British colonial rule. In the frontier regions of Myanmar, local ethnic minority groups have never built upasense of "national identity." And the Rohingya people have never been recognized as an indigenous ethnic group, and have thus become stateless refugees.
The reforms being carried out by the current Myanmese government, especially since the government has achievedaceasefire agreement with the independent armed forces from many minority groups, are bringing unprecedented hope for the nation's prospects.
However, Myanmar's complex ethnic problems cannot be fixed either in the short term, or by the appearance of one or two opposition leaders. It isapolitical, economic, social, and cultural issue.
What's happening in West Asia and North Africa is also an example. The elections in Egypt may further split the society and even trigger more religious conflict.
However,amore severe challenge facing Southeast Asian countries like Myanmar is that if they are too heavily influenced by the West and excessively stress Western models during their system transformation, they may face long-term turbulence in the future. A weak, divided government isn't able to solve complex ethnic problems.
What's worse, situations in border areas may get worse and run out of control. Excessive and hasty democracy may bury the fragile reconciliation which has just been achieved.
John Funston, an Australian scholar and expert in Southeast Asian studies, wrote in his book Government and Politics in Southeast Asia (2001) that better governance, including more democracy, is widely seen as progress, but it's not the universal elixir that some believe in. More democracy may provide chances for all kinds of extremists.
ရေးသားသူ - ---- at Wednesday, June 27, 2012
ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး အငြင်းပွားနေတဲ့အရာကတော့ နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့် နဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပိုင်ခွင့် တို့ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားက စာနဲနဲတတ်တဲ့ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်လို့ ပြောတဲ့လူတွေက တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ကိုပဲ အဓိက ဦးတည်တောင်းနေတာကိုပဲတွေ့ ရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ အစည်းတွေက အဓိက ပါဝင်ပါတယ်။ သြစတျေးလျနိုင်ငံမှာတောင် ရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုရှိတယ်။ သူတို့ ရဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်က ဘင်္ဂါလီကုလားတွေကို ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ ဖြစ်တယ်။ ဘာ့ကြောင့်တိုင်းရင်းသားအဖြစ်တောင်းရလဲဆိုတော့ ဦးနုအစိုးရဖြစ်တုန်းက သူတို့ ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေကို ကိုးကားပြီး အဓိက သက်သေအဖြစ်တင်ပြကြတယ်။
ဒါကို ငြင်းစရာအဖြစ်မမြင်မိပါဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဦးနုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ သော် အဲဒိတုန်းက တိုင်းပြည်ရဲ့ အခြေအနေက ယနေ့ ကာလထက်ပြည်တွင်းစစ်က ပိုပြီး ကြီးတယ်။ ရန်ကုန်အစိုးရလို့ ပြောနေကြတာပဲ မဟုတ်ဘူးလား။ လူမျိုးတစ်မျိူးကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုတယ်ဆိုတာက ဦးနုရဲ့ ပါးစပ်ထဲကနေ ဖြစ်စေဆိုတဲ့ အမိန့် နဲ့ လုပ်လို့ မရတာကို သတိရဖို့ ကောင်းတယ်။ ဒါကို နိုင်ငံခြားက ဘွဲ့ ရထားတဲ့ ကုလားခေါင်းဆောင်တွေ ပိုပြီးသိမယ်လို့ ယူဆမိတယ်။
အနောက်နိုင်ငံတွေကပြောနေတဲ့ လူ့ အခွင့်အရေးကြေငြာစာတမ်း၊ နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပိုင်ခွင့် နဲ့လူ့ ဂုဏ်သိက္ခာရရှိရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကို အဲဒိမှာပညာသင်ခဲ့ခေါင်းဆောင်တွေ သိတယ်ဆိုရင် ဦးနုတို့ လုပ်ရပ်က မှားသလားမှန်သလားဆိုတာကို သဘောပေါက်ပါလိ့မ်မယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံမှာ ရက်အင်ဒီယန်းဆိုတဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်။ သြစတျေးလျမှာလည်း ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရှိသလို နယူးဇီလန်မှာလည်း မာရီဆိုတဲ့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားတွေရှိတယ်။ အင်္ဂလိပ်တွေက အမေရိကန်၊ သြစတျေးလျနဲ့ နယူးဇီလန်နိုင်ငံတွေကို သိမ်းပိုက်ပြီး အုပ်ချုပ်ခဲ့တာဟာ ယနေ့၂၀၁၂-မှာဆိုရင် နှစ်ပေါင်း နှစ်ရာကျော်ရှိပြီ။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံက မြန်မာပြည်ထက်ပိုပြီး များပါတယ်။ ရောက်နေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ဥရောပသားတွေမှာ သူတို့ ကိုယ်သူတို့ ဌာနေတိုင်းရင်းသားအဖြစ် ဘယ်တော့မှ မတောင်းခဲ့သလို ဌာနေတိုင်းရင်းသားဘယ်သူတွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကို လုံးဝကို အသိအမှတ်ပြုပေးကြပါတယ်။ ဒီအခြေအနေကို အမေရိကန်၊ သြစတျေးလျ နဲ့ အင်္ဂလန်မှာနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေမသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ သိပါတယ်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ပြည်ပက ရိုဟင်ဂျာအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေရောချနေတယ်လို့ ထင်တယ်။ သူတို့ က သူတို့ ဘ၀ရဲ့ ဇစ်မြစ်ကို ကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ သူတို့ ဟာ ဘယ်နိုင်ငံကနေ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲကို ရောက်ခဲ့လဲဆိုတာ သူတို့ လုံးဝ သိပါတယ်။ ဒီလိုသိတာအပြင် တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်း ပညာသင်ထားခဲ့တဲ့လူတွေအနေနဲ့ ဘာ့ကြောင့်များ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်တောင်းလဲဆိုတာက တွေးစရာအရမ်းကောင်းပါတယ်။
နိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျနော့်အနေနဲ့ အငြင်းပွားစရာမရှိပါဘူး။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေအပြင် ကုလားကော တရုတ်ကော ရှိတော့....စဉ်းစားတဲ့အခါတိုင်းအကုန်လုံးအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်တယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာအရေးက အရမ်းကို ဆူညံနေမှ ဒီအိတ်ရှုးကို ကောက်ခါင်ငင်ခါ ပြောတာထက်စာရင် အနာဂတ်အတွက်ပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစာသင့်တယ်။ ကျနော်တို့ ပထမလက်တလောမြင်နေရတဲ့ အခြေအနေကို ကြည့်တဲ့အခါမှာ ထင်ထင်ရှားရှားမြင်ရတာက မြန်မာပြည်မှာ ကုလားတွေအများကြီး နှစ်ပေါင်းများစွာနေနေကြတယ်။ သူတို့ တွေကို ကျနော်တို့ က တစ်စုံတစ်ရာနိုင်ငံသားဖြစ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ အခွင့်အရေးကို ပေးမှ ရမယ်။ မင်းတို့ က ဘင်္ဂါလီကုလားဖြစ်တယ် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကို ပြန်လို့ ဆိုပြီး အတင်းမောင်းထုတ်လို့ လည်း မရဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ သူတို့ က မျိူးဆက်သုံးလေးဆက် မြန်မာပြည်မှာရှင်သန်ခဲ့တာပဲဆိုတော့ သူတို့ နိုင်ငံက နိုင်ငံသားပေးပေးမပေးပေး မြန်မာပြည်ဟာ သူတို့ နိုင်ငံဖြစ်နေပြီ။ ရခိုင်မှာ ကုလားဗမာ အရေးပြီးတော့ တချိူ့ ကုလားတွေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ့် ကိုလှေနဲ့ ထွက်ပြေးတော့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှကတောင် ပြန်မောင်းထုတ်တာကို ကြည့်ရင် သိသာနိုင်တယ်။ သူတို့ မှာ မြန်မာပြည်ပဲရှိတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ သတိထားဖို့ က ကိုယ့်လူမျိူးကို နှိပ်စက်သလို မလုပ်မိဖို့ အရေးကြီးတယ်။ ကိုယ်ကတော့ ကွန်ပြူတာရှေ့ မှာထိုင်းပြီး ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေးရေး၊ မြန်မာအစိုးရက ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားတွေကို လူမျိုးစုလိုက် အကုန်သတ်ရေး၊ လူ့ အခွင့်အရေး၊ စတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ လှုံဆော်တိုင်း အထူးဆင်ခြင်စရာတစ်ခုရှိတယ်။ နောက်ဆုံးခံရတာက မြန်မာပြည်က ခင်ဗျားတို့ ရဲ့ အမျိုးတွေ မြန်မာပြည်မှာလည်း နေမရ၊ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှကလည်း လက်မခံပဲ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ကြရတယ်။ အိုးအိမ်တွေ ပျက်စီးရတယ်။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဘ၀ တွေပျက်စီးခဲ့ရပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေကို မဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုရင် တိုင်းရင်းသားအဖြစ်တောင်းဆိုနေမှု့ တွေကို ရပ်မှ ရမယ်။ ခင်ဗျားတို့ တောင်းလေ ကုလားမဟုတ်တဲ့လူတွေက ဒေါသထွက်လေပဲ။ မြန်မာလူမျိူးဆိုတာက ဒေါသထွက်ရင် ပါးစပ်နဲ့ ထွက်တဲ့လူမျိူးမဟုတ်တော့ အနည်းဆုံး ဒါးနဲ့ တော့ခုတ်နိုင်တယ်။
တိုင်းရင်းအသားအရေးတောင်းဆိုမှု့ ကို အစိုးရကလည်း အသိအမှတ်ပြုလို့ မရသလို၊ လူတစ်စုကလည်း အသိအမှတ်ပြုလို့ မရဘူး။ ဒါက နိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ လူတိုင်းရဲ့ သမိုင်းကြောင်းနဲ့ ဆိုင်တယ်။ ဒါကို သဘောမပေါက်ပဲ ကိုယ်လိုချင်တာကို လိုင်းတွေစွတ်တင်တဲ့အခါမှ ကိုယ်ပဲ နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်ရတာကို သတိထားကြပါ။
တချိူ့ သော နိုင်ငံခြားက လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့မီဒီယာတွေက ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပက်သက်ရင် သူတို့ က သနားကြတယ်။ သတင်းထဲမှာလည်း ကုလားတွေ လှေတွေနဲ့ စားရမဲ့ သောက်ရမဲ့ သူများနိုင်ငံမှာ လာပြီးနေဖို့ ကို မောင်းထုတ်တာလည်း နိုင်ငံကြီးတွေက သိတယ်။ တစ်ခါတုန်းက ထိုင်းနိုင်ငံကို ရောက်လာတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလှေတွေကို အင်ဂျင်ဖြုတ်ပြီး ပြန်မျှောလိုက်တာကို နိုင်ငံတကာက အင်မတန် သနားတယ်။ နောက်ပြီး သြစတျေးလျနိုင်ငံကို လှေတွေနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားဘက်ကနေ ခိုးဝင်နေတဲ့ မြန်မာပြည်က လူတွေရှိတယ်။ ဒီအထဲမှာ မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာတွေပါတယ်။ တစ်ခုစဉ်းစားဖို့ က အင်ဒိုးနီးရှားကနေ သြစတျေးလျအထိ လှေနဲ့ ခိုးဝင်တာဆိုတာက ဘယ်လောက်ထိငွေရှိမှ ဖြစ်လဲဆိုတာကို တွေးကြည့်ယုံနဲ့ သိနိုင်တယ်။ လှေနဲ့ လာတဲ့လူတိုင်းလိုလိုက အီရတ်၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ အာဖဂန်နစ်စတန်က ကုလားတွေချည်းပဲ။ သိရိလင်ကာကကုလားအပြင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ကုလားတွေလည်းပါတယ်။ ကုလားဆိုတာက ရုပ်ချင်းကလည်း ခပ်ဆင်ဆင်၊ စကားကလည်း အတူတူ၊ သိတ်ပြီးကွဲတာမဟုတ်ဘူး။ သြစတျေးလျလည်းရောက်ရော သူတို့ က မြန်မာပြည်က ရိုဟင်ဂျာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးလိမ်ရောပဲ။ မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြေအနေက လိမ်လို့ ကောင်းတောဆိုတော့။ ဒါနဲ့ တဆက်တည်း မြန်မာအစိုးရက နှိပ်စက်တယ်။ ရခီးတွေက သတ်တယ်။ နိုင်ငံသားမပေးဘူးဘာညာဆိုပြီး ရွှီးရော။ ကုလားဆိုတဲ့လူတွေက အောက်ကျို့ တဲ့နေရာမှာ ချီးပါးစားရစားရ အောက်ကျို့ နိုင်သလို အပေါ်စီးရောက်ရင်လည်း လည်ပါလှီးတတ်ကြတယ်။ ဆော်ဒီအာရေဗီယျမှာ အလုပ်သွားလုပ်တဲ့ လူတွေဘယ်နှစ်ယောက်တောင်ခေါင်းဖြတ်ခံရတာလဲဆိုတာ သတိထားပြီးလေ့လာကြည့်ပါ။ သြစတျေးလျအစိုးရကလည်း သနားတက်ရင်သူများမတူဘူး။ ဘာမှစဉ်းစားစာတာမဟုတ်ဘူး။ ဒါနဲ့ ဘယ်ကကုလားမှန်းမသိဘူး။ ရိုဟင်ဂျာဆိုပြီး ဖြစ်သွားရောပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့ ကာလမှာ ကုလားအရေးကို ခုတုံးလုပ် လုပ်စားနေတဲ့လူတွေအတွက်တော့ အခွင့်ကောင်းပဲ။
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်နိုင်ငံတွေဟာ မြန်မာပြည်အနီးမှာ ရှိတာကို လူတိုင်းသိတယ်။ လူဦးရေဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတာကိုလည်း အားလုံးသိတယ်။ ကြီးတာတင်မဟုတ်ဘူး လျှံပါကျနေပြီ။ ကုလားနဲ့ တရုတ်ကို မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဒီကောင်တွေက လီးအရမ်းတောင်တဲ့လူမျိူးတွေ။
သူတို့ တွေနဲ့ ပက်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံက လူဝင်ကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကို သေသေချာချာ ကိုင်တွယ်ဖို့ လိုတယ်။ ဥပဒေတော့ရှိတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေက လာဘ်စားပြီး မှတ်ပုံတင်လုပ်ပေးတော့ ကုလားနဲ့ တရုတ်က မများသင့်ပဲများရတယ်။ နောက်ပြီး ဒီကောင်တွေက ခလေးတွေလည်း အသားကုန်စွတ်မွေးတော့ ရခီးတွေ ဘယ်ပြေးရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး။ သူတို့ လူမျိူးက ၀ါးမျိုသွားသလိုပဲ။
လက်ရှိအခြေအနေမှာ ရခိုင်လူငယ်လူရွယ်တွေ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်ထွက်လုပ်ကြတော့ ရခိုင်ပြည်မှာ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးနဲ့ ခလေးတွေပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရခိုင်ရွာတွေကို မီးရှို့ တုန်းကဆိုရင် အသက်လုပြီးပြေးခဲ့ကြရတယ်မဟုတ်လား။ ဒါတောင် ရခိုင်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ချင်းပြည်နယ်မှာလည်း ပုလုံးတွေပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ်။ ချင်းကောင်းကေင်းသန်သန်မာမာတွေ မလေးရှားမှာချည်းပဲ။ မြန်မာပြည်တစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရင် ရွာတွေမှာ သန်သန်မာမာတွေမရှိသလောက်ဖြစ်နေပြီ။ ကရင်ဆိုရင် ပိုဆိုးသလားပဲ။
အရွယ်ရောက်တာနဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ထွက်လုပ်ကြတော့ မြန်မာပြည်ထဲမှာ အဘိုးကြီး၊ အဘွားကြီးရယ်၊ ခလေးသူငယ်ပဲ ကျန်ခဲ့တော့တယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ တရုတ်နဲ့ ကုလားအပြင် ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ စောက်ကုလားက တစ်မှောင့်။ ဆိုတော့ ကြာလာရင် မြန်မာပြည်နဲ့ မြန်မာလူမျိူးဟာ ဘာရုပ်ပေါက်နိုင်လဲဆိုတော့ အသားဖြူဖြူ၊ ကုလားမျက်နှာနဲ့ ဗမာစကားပြောရမဲ့ ရုပ်ပေါက်တော့မယ်။ ဒီနေရာမှာတိုင်းရင်းသားတွေသတိထားဖို့ က ကိုယ့်အချင်းချင်း မဟာလူမျိူးကြီးဝါဒတို့ ၊ မဟာလူမျိူးသေးဝါဒတို့ ဘာညာ လျှောက်ပြောမနေနဲ့ တော့။ အဓိကပြောရမှာက ကိုယ့်နယ်မြေမှာ ကိုယ့်လူမျိူးကို ကာကွယ်ဖို့ စကားပဲပြောကြ။
အစိုးရအနေနဲ့ သူများနိုင်ငံတွေ ဘယ်လိုမျိူး နိုင်ငံသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေးတယ်။ ဘယ်လိုမျိူးထိန်းကွပ်လဲဆိုတာကို လေ့လာဖို့ ကောင်းတယ်။ အကူအညီတောင်းသင့်တယ်။ E-immigration စနစ်ကို သုံးသင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ တချိူ့ သော ကုလားနဲ့ တရုတ်တွေကို မြန်မာနိုင်ငံသားအဖြစ်ပေးကိုပေးရတော့မယ်။ FRC စနစ်ကိုဖြုတ်သင့်တယ်။ မလုပ်ပဲ ဒီအတိုင်းဆက်ထားရင် ကုလားက အသေခံဗုံးခွဲတာတို့ ဘာလုပ်လာရင် မဆိုင်တဲ့လူတွေအသက်ထွက်ရအုံးမယ်။
ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့မြန်မာလောဘီရစ်ထ်တွေသတိထားဖို့ က ခင်ဗျားတို့ လုပ်လေ ပြည်သူလူထုက တင်းလေပဲ။ အဲဒိလိုဖြစ်လေ မြန်မာပြည်ထဲက ကုလားက နိုင်ငံမဲ့ဖြစ်လေပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ကတော့ ကွန်ပြူတာရှေ့ မှာထိုင်၊ ဟိုအစည်းအဝေးတက် ဒီအစည်းအဝေးတက်ပြီး ရေဒီယိုမှာအာတာက မပင်ပန်းဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ်က ကုလားက ဘာမှမသိပဲ ဒုက္ခရောက်ရတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။ အပြစ်မဲ့တဲ့ကုလားတွေတစ်ပုံကြီးပဲ။ ဘယ်လောက်သနားစရာကောင်းလဲ။ သူတို့ ခင်ဗျာ ဘာမသိပဲ ကုလားလေးတွေကို ပိုက်ပြီး မိခင်ကုလားမကြီးတွေ မိုးထဲရေထဲမှာ ငတ်ပြတ်ပြီးပြေးကြရတာ။ သူတို့ လည်း လူတွေပဲ။ ရိုဟင်ဂျာခေါင်းဆောင်ကတော့ ကြောင်လျှာသီးလည်မှာဆွဲပြီး ကိုရန်ကျမ်းစာကို ပိုက် ခေါင်းပေါင်းဆောင်းပြီး အေးအေးချမ်းချမ်း နေနိုင်တယ်။ မိန်းမလည်း လစ်ရစ်လစ်သလို သုံးလေးယောက်ယူနိုင်တယ်။ ရခိုင်းပြည်က ကုလားငမွဲကတော့ စုတ်ပြတ်သတ်နေတာပဲ။ ဒီအခြေအနေကို ဒုက္ခထပ်ရောက်အောင် ဆွ မပေးကြပါနဲ့ ဗျာ။
မီဒီယာပေါ်မှာတွေ့ နေတဲ့ ဟန်ညောင်ရွှေ၊ ကိုဇော်ဦးနဲ့ ဒေါက်တာဇာနည်တို့ အနေနဲ့ ပြည်သူလူထုကို ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီး ရှင်းပြဖို့ လိုတယ်။ ရခိုင်ပြည်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စက ခင်ဗျားတို့ ပရောဂလည်းမကင်းဘူး။
ဒိုနာတွေဆီက ပိုက်ဆံရချင်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ ကုလားကိုလည်း ဒူးထောက်တယ်။ အရှေ့ ဥရောပက ကွန်မြူနစ်ကိုလည်းဖင်ခံတယ်။ လစ်ဘရယ်နဲ့ တွေရင်လည်း BJ လုပ်တယ်။ မြန်မာအစိုးရနဲ့ တွေ့ ပြန်တော့လည်း ဘောမ ပေးကြတယ်။ အဲဒိလိုလုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ၊ လူ့ အခွင့်အရေးသမားနဲ့ မီဒီယာသမားတွေ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကကနေ မောင်းထုတ်ဖို့ အချိန်တန်နေပါကြောင်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
ရေးသားသူ - ---- at Wednesday, June 20, 2012
၁၉၉၇-ခုနှစ်မှာ ကျနော် ၁၀-တန်းရောက်တော့ အလုပ်တစ်ခုပြောင်းခဲ့တယ်။ ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ အထည်ချုပ်စက်ရုံတွေကိုသွားပြီး နေ့ စားအဖြစ် အထုတ်အပိုးတွေထမ်းပါတယ်။ ရတဲ့လစာက ကျနော့် လက်ဘရည်ဖိုးလောက်ပဲရတယ်။
စက်ရုံမှာလုပ်တဲ့ အလုပ်သမားတိုင်းက အကြွေးနဲ့ မကင်းဘူး။ အထည်ချုပ်စက်ရုံဆိုတော့ လစ်ရင်လစ်သလို အထည်အလိပ်တွေကို ဘတ်ပြီး အပိုဝင်ငွေရှာရတယ်။ဆိုလိုချက်က ခိုးတယ်။ တစ်ခါတလေ လစာတိုးရင် ကျနော်တို့ အရမ်းပျော်တယ်။
အဲတုန်းက ရတဲ့လစာက သုံးလေးသောင်းပဲ။ အခုလို သိန်းနဲ့ ချီပြီး မရဘူး။
အခုဆိုရင် မီဒီယာမှာ တွေ့ ရတယ်။ အလုပ်သမားတွေ လစာတိုးတောင်းတဲ့သတင်းတွေ။ သူတို့ တိုးတောင်းတဲ့လစာက မြန်မာငွေသုံးလေးသောင်း။ ဒေါ်လာနဲ့ ဆိုရင် ဒေါ်လာသုံးလေးဆယ်ပဲရှိတယ်။ ဒါကိုရဖို့ အတွက်အသည်းအသန်လုပ်ကြ တောင်းကြရတယ်။
ကျနော် သြစတျေးလျနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်တော့ ကျနော့်ရတဲ့လစာက မြန်မာပြည်မှာ တစ်လလုပ်ရင် သြစီမှာ တစ်ရက်လုပ်တာနဲ့ ညီမျှတယ်။ အခု မြန်မာပြည်မှာ တိုးတောင်းတဲ့ သုံးလေးသောင်းဆိုတာက ကျနော်တို့ ဒီမှာ အရက်တစ်လုံးဖိုးတောင် မရှိဘူး။
ဒါကို အသည်းအသန်ပေးဖို့ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ လုပ်လိုက်ကြရတာ။ သနားစရာအရမ်းကောင်းပါတယ်။
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မြန်မာအလုပ်သမားတွေကို အခြေခံလစာအဖြစ် တိုးတဲ့ဟာကလည်း နှစ်ဒေါ်လာလောက်ပဲရှိနေတယ်။ အတော့်ကို ပြန်ပြင်ရအုံးမဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေပြီ။
အရင်တုန်းက ဘာ့ကြောင့် မြန်မာပြည်က လူတွေဟာ လစာရတာနည်းပြီး သြစီတို့ အမေရိကန်တို့ က လစာရတာများလဲဆိုတာကို ခဏခဏတွေးမိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စီးပွားရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့သင်တန်းကို တက်ဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၆-ခုနှစ်မှာ စီးပွားရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ဘာသာရပ်သင်တန်းကိုသွား
တက်တော့ ဆရာက ဒီလိုပြောပါတယ်။
မင်းတို့ မြန်မာပြည်က Efficiency မရှိဘူးတဲ့။ သြစတျေးလျ အမေရိက စတဲ့နိုင်ငံတွေက Efficiency ရှိတော့ လစာများများရတယ်လို ပြောတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သူတို့ က လစာရတာ များပြီး မြန်မာပြည်က လစာရတာ နည်းပါတယ်။ ဥပမာ သြစတျေးလျက ကျနော်တစ်ရက်လုပ်တဲ့ အလုပ်ဟာ မြန်မာပြည်မှာ တစ်လလုပ်တာ နဲ့ ညီမျှပါတယ်။ ကျနော် ဆန်အိတ်ဆယ်အိတ်ကို သြစီမှာ တစ်မိနစ်အတွင်း Folklift အကူအညီနဲ့ ကားပေါ်ကို ထမ်းပြီးတင်နိုင်တယ်။ ဒီဆယ်အိတ်ကို မြန်မာပြည်မှာ သုံးလေးနာရီကြာအောင် ထမ်းရတာဆိုတော့ သူတို့ ပြောတဲ့ Efficiency ဆိုတာ ဒါလားဆိုပြီးသဘောပေါက်မိတယ်။ ဒါနဲ့ ယှဉ်ပြီး စဉ်းစားတော့ ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က ကုန်ထုတ်လုပ်မှု့ ကို အက်ဖ်ရှန်စီ ဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်။ ဒါမှ သူတို့ လစာများများရမယ်။ ကုန်ထုတ်လုပ်မှု့ က အက်ဖ်ရှန်စီဖြစ်ဖို့ ဆိုရင် အခုသွားနေတဲ့ဟာကို ပြင်ဖို့ လိုနေပြီ။ ဒါကတော့ ဗျူရိုကရေစီစနစ်ပဲ။ ဗျူရိုကရေစီစနစ်က အဓိကတရားခံပဲ။ ဒီစကားလုံးကို ဘာမှမတက်ပဲ အစိုးရ၀န်ထမ်းလုပ်တာပေါ့လို့ ဘာသာပြန်ချင်ပါတယ်။ ပြီးရင် စောက်လုပ်မလုပ်ပဲ တောင်းစားတယ်။ အဲဒါကို မြန်မာတွေက တရားတယ်လို့ ယူဆတယ်။ အကုန်လုံးမဟုတ်ပါဘူး။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲတဲ့အခါတိုင်းမှာ ဗျုရိုကရေစီစနစ်နဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ကိုင်ထားတဲ့လူတိုင်းကို အနားပေးဖို့ လိုတယ်။ ဒါမှ အသစ်ဖြစ်မယ်။ တိုးတက်မယ်။ ဆက်ထားရင် ဆက်ဖြစ်အုံးမှာပဲ။
အခု မြန်မာပြည်က အလုပ်သမားတွေဆန္ဒပြတဲ့ကိစ္စ လစာတိုးတောင်းတဲ့ကိစ္စက နိုင်ငံခြားနဲ့ ယှဉ်ရင် ဒေါ်လာသုံးလေးဆယ်ပဲရှိတယ်။ ဒီလစာကလည်း အရက်တစ်လုံးဖိုးတောင်မရဘူး။ အသည်းအသန်တောင်းလို့ မှမရရင် ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတော့ အစိုးရကို ဖြုတ်ချယုံပဲ။ ဒီစကားလုံးကို နားလည်ဖို့ လိုတယ်။ အစိုးရအသုံးမကျလို့ ပေါ့လို့ ပဲပြောချင်တယ်။ အဲဒိစကားရဲ့ နောက်ဆက်တွဲက အများကြီးပဲ။ အသုံးမကျလို့ ဆိုတာကို အသုံးမကျလို့ ပေါ့လို့ ဒီနေရာမှာပြောချင်ပါတယ်။ ဥပမာ စီးပွားရေးပညာရှင်တစ်ယောက်လုပ်တဲ့သူဟာ ကိုယ်ပိုင်အိမ်တောင်မပိုင်ဘူးဆိုရင် ဒီလူဟာ ပညာရှင်မဟုတ်တော့ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ အဲလိုလူတွေများနေပါတယ်။
ဒေါ်စုကတော့ နိုင်ငံရေးအတွက် ခုတုံးလုပ်ပြီး အလုပ်သမားအရေးမလုပ်ဖို့ ပြောမှာပဲ။ သူက အဲလိုမှမပြောရင် ဘယ်လိုပြောမှာလဲ။ သူက သူ့ နေရာနဲ့ တန်တဲ့စကားကို သူပြောရမှာ။ ဒါက သူ့ ရဲ့ အလုပ်။
ကျနော်တို့ တာဝန်က ဘာ့ကြောင့် ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကို အလုပ်သမားတွေရဲ့ ခေါင်းထဲကို ရောက်အောင်ရှင်းပြဖို့ ၊ ဆွပေးဖို့ လိုတယ်။ ဒါမှ သူတို့ သိမှာပေါ့။ လစာတိုးတောင်းတာတစ်ခုတည်းနဲ့ မလုံလောက်ဘူး။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ တိုးတာင်းတဲ့လစာကလည်း နိုင်ငံခြားနဲ့ ယှဉ်ရင် အရက်တစ်လုံးဖိုးတောင် မရှိဘူး။ အခုကာလမှာ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်းပြောရရင် ဖာတစ်ခါချရင် နာရီဝက်ကို ဒေါ်လာ တစ်ရာ့ငါးဆယ်တောင်ပေးရနေတဲ့ခေတ်ရောက်ပြီ.....အမရေ။
ယခုစာအား ကျနော့်လေးစားရသော အမကြီး မအိရွှေဇင်အား ရည်ဇူးပါသည်။
အော်....မြန်မာအစိုးရ မြန်မာအစိုးရ...တော်တော်လည်း တက်နိုင်တယ်။ ရခီးနဲ့ ခေါတော ကုလားတွေ သတ်ကြ မီးရှို့ တဲ့အခါကြတော့ ရာဘာကျည်ဆံနဲ့ ပစ်တဲ့။ ကျနော်တို့ ဘုန်းကြီးတွေ ကျောင်းသားတွေကြတော့ ရိုက်လိုက် ပစ်လိုက်တာများ ဘုန်းကြီးတွေ သင်္ကန်းတောင်မနိုင်ဘူး။ ခွေပြေးဝက်ပြေးပဲ။ ဒီဘုန်းကြီးတွေကလည်း သူတို့ အလုပ်က ဘာသာရေးကို ဘာ့ကြောင့်များနိုင်ငံရေးလုပ်ချ
ကျနော်စာထဲမှာ ကုလားနဲ့ ရခီးဆိုပြီး သုံးနှုံးထားတယ်။ ဒါနဲ့ ပတ်သတ်ပြီးအီးမေးပို့ လာကြတယ်။ ကုးလားကော ရခီးကော။ ပြန်ပြင်တဲ့။ သူတို့ ကိုနှိမ်တယ်....မဟာဗမာလူမျိုးကြီး ဘာညာဆိုပြီး ဆဲတယ်။ ငယ်ငယ်လေးကတည်းက ကုလားနဲ့ ရခီးလို့ခေါ်လာခဲ့တာပဲ။ ပါးစပ်က အကျင့်ပါနေပြီ။ မပြင်နိုင်ဘူးဟေ့...။ ကိုယ့်ပါးစပ်နဲ့ ကိုယ်ပြောတာကိုများ မဟာဗမာလူမျိုးကြီးတို့ ဘာတို့ ဖြစ်ရသေးတယ်။ စောက်ရှုးတွေလိုပဲ။ ခင်ဗျားတို့ ပြောနေတဲ့ မဟာဗမာလူမျိုးကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးကို ကုလားနဲ့ တရုတ်ကိုသွားပြောကြည့်ပါလား။ သူတို့ တွေ ကလိမထိုးပဲ ရယ်(ရီ)လိမ့်မယ်။ သူတို့ လူမျိုးကမှ သန်းသုံးထောင်လောက်ရှိတော့မယ်။ အဲဒိကြားထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံက ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်က သန်းသုံးဆယ်တောင်မရှိတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ များ မဟာဗမာ လူမျိုးကြီးဆိုပြီး လျှောက်ပြောချင်နေသေးတယ်။
အခုတစ်လော အန်အယ်ဒီက အမတ်တွေ ရောင်းကောင်းနေတယ်။ နိုင်ငံခြားကိုလည်း သွားရတယ်။ မ၀တ်ဘူးတာ ၀တ်ရတယ်။ မစားဘူးတာ စားရတယ်။ သူတို့ တွေကိုကြည့်ရတာအားကျလိုက်တာဗျာ။ ဘာအလုပ်မှ ပင်ပင်ပန်းပန်းမလုပ်ရပဲ လွှတ်တော်အမတ်ဆိုတဲ့ လစာလေးလည်းရ...ရာထူးလေးရ...ကိုယ်ဝန်လေးလည်း ရလို့ ပြောရမလိုပဲ။
ဟို....တစ်ယောက်ကျန်သေးတယ်။ လှည်းကူးက အဘွားကြီးကပြောတယ်။ ဟိုအခြောက်လိုလို နှစ်ဘတ်ချွှန်လိုလို တစ်ယောက်လည်း မဲ လိုချင်တုန်းကတော့ မျက်နှာကိုဖြီးနေတာပဲတဲ့။ မဲလည်းနိုင်ပြီး သြစီကလည်း ပြန်လာရော စောက်ချိူးက အရင်ကနဲ့ မတူဘူးတဲ့ဗျာ။ ကောင်းရော။
ဦးသိန်းစိန်ရေ...ကျနော်တို့ ကိုလည်းတစ်ချက်လောက်လှည့်ကြည့်ပါအုံးဗျာ။ ကိုယ့်နိုင်ငံကို ပြန်ဖို့ အတွက် ဗီဇာလျှောက်တာတောင် မပေးကြဘူး။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံခြားက လူတွေက မြန်မာတွေပါဗျာ။ ငပိရည်စားပြီးကြီးလာတာပါ။ ကျနော်တို့ က ခင်ဗျားတို့ သေနတ်နဲ့ မပစ်ရဲတဲ့ ကုလားတွေလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လည်းမတောင်းပါဘူး။ နယ်မြေလည်းမလုပါဘူး။ ကုန်ကုန်ပြောရရင် မြန်မာပြည်မှာ လာပြီး ဆန္ဒလည်းမပြချင်ပါဘူး။ အလုပ်ရှုပ်လို့ ပါ။ လိုချင်တာတစ်ခုက ကိုယ့်မြေကိုယ့်ရေမှာ ဘုရားတွေလည်း ဖူးချင်၊ လိပ်ဥချောချောတွေလည်း တူးချင်လို့ ပါဗျာ။ ဘုန်းကြီးတွေကိုတော့ မလှူချင်ပါဘူး။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောတယ်။ နောက်တစ်ခါ မဲ့ဆောက်ကိုလာရင် အတိုက်အခံအဖွဲ့ တွေနဲ့ အရက်အတူတူ သောက်မယ်တဲ့။ အခုတစ်ခေါက်တော့ မဲ့ဆောက်က အသည်းခြောက်နေတဲ့ လူတွေနဲ့ စကားပြောရင် အရက်စော်နံမှာစိုးလို့ လာမတွေ့ နိုင်တာကို ခွင့်လွှတ်ပါတဲ့။ မနေ့ က ကျနော်နဲ့ လေယျာဉ်ပေါ်မှာဆုံတုန်းက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ခင်ဗျားတို့ ကို သူက အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ သူပြောတာက ထိုင်းကလူတွေက လေတော့ အတော်ကောင်းတယ်ဆိုပဲ။ သူက အဲလိုအသိအမှတ်ပြုတယ်။ ပရိုပိုဆယ်ရေးတာများ မျက်စိတောင်မှိတ်ပြီး ရေးနိုင်းတယ်ဆိုပဲ။ သူနဲ့ တွေ့ တဲ့ အဖြူတွေက ခင်ဗျားတို့ လိမ်တာကို လိမ်မှန်းသိသိကြီးနဲ့ ခံရလို့ ရှက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ဒေါ်စုကို မျက်ရည်စက်လတ်နဲ့ တိုင်ကြသတဲ့။ ကျနော်ကတော့ ဒီလို ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်။ ဟင်္သာတ ထွန်းရင် သီးချင်ထဲကလို တနယ်တကျေးမှာ လိမ်မာစမ်းပါသားရေဆိုပြီးတော့...။
ရေးသားသူ - ---- at Thursday, June 14, 2012
ဒီအတိုင်းပဲနေပြီး ၂၀၁၅-အထိစောင့်မှာလား။ ထောင်ထဲက ကျန်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးတွေကို မေ့သွားပြီလား။ တစ်တိုင်းပြည်လုံး အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး မလုပ်ပဲ ဆွေးနွေးနေတဲ့ပွဲတွေကို ထောက်ခံတော့မှာလား။
ဆန္ဒပြပွဲတွေ ဟိုတစ်စု ဒီတစ်စုကို စုစည်းပြီး နိုင်ငံရေးတောင်းဆိုသံ တစ်ခုအဖြစ် ပြောင်းလဲသင့်နေပြီ။ ဒါကတော့ ကြံ့ဖွတ်အစိုးရကို အယုံအကြည်မရှိတဲ့ အသံဖြစ်ပါတယ်။ ရွေးကောက်ပွဲအသစ်ကို ကျင်းပပြီး အစိုးရအသစ် တစ်ခု တင်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ အစိုးရဟာ အရည်အချင်းနဲ့ အရည်အသွေးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် နှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ထင်သလောက်ခရီးမရောက်ခဲ့ဘူး။ အောင်မြင်မှုမရခဲ့ဘူး။ သူတို့ ဘာတွေများ သိသိသာသာပြောင်းလဲခဲ့လဲဆိုတာကို ရှာကြည့်ပါတယ်။ ဘာမှ မရှိသလောက်ပဲ။ ဒါကို ကျနော်တို့ အတိုက်အခံတွေက ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆက်ပြီး လုပ်အုံးမှာလားလို့ မေးရမဲ့အချိန်ရောက်နေပြီ။
ဦးသိန်းစိန်က လာပြီးပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရင် နေရာပေးမယ်လို့ မပြောခဲ့ဘူး။ ပေးလည်းမပေးခဲ့ဘူး။ ကိုယ့်ဘက်ကပဲ ပူးပေါင်းဆောက်ရွက်ခဲ့ရတယ်။
အမေစုနဲ့ အန်အယ်ဒီတို့ လွှတ်တော်ထဲကို ရောက်နေလို့အစိုးရကို အားနာနေသလားလို့ တောင် ထင်မိတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့ အစည်းကန်ပိန်းနောက်ကိုပဲ အသည်း အသန်လိုက်ပြီး ထောင်ထဲက ကိုယ့်မိတ်ဆွေအတွက် မေ့နေသလိုဖြစ်နေပြီ။ အလုပ်သမားတွေက ဆန္ဒပြလည်း သူတို့ ပါတယ်။ ပွင့်လင်းတာလည်း မလွတ်ဘူး။ ကုလားနဲ့ ရခီး သတ်ကြလည်း ၀င်ပြီး အာတယ်။ လယ်သမားကိစ္စမှာလည်း လယ်သမားက ဦးမဆောင်ရပဲ ဘာမဟုတ်တဲ့ လူက ၀င်ပြီး မိုက်ကိုင်တာက သဘာဝမကျဘူး။ ကိုယ့်အသံကို ကိုယ်က မပြောပဲ သူများတွေ အုပ်စုအုပ်စုလုပ်တိုင်း ၀င်ပါတာက နိုင်ငံရေးသမား (သို့ ) အတိုက်အခံမဟုတ်တော့ပဲ Role ပျောက်နေသလိုဖြစ်နေပြီ။ အပြစ်တင်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ မြင်တွေ့ နေရတာကို ပြောနေတာပါ။
အတိုက်အခံဆိုတာ အစိုးရရဲ့ ပေါ်လစီအမှား လုပ်ရပ်အမှားတွေကို ထောက်ပြပြီး ကိုယ်အာဏာရလာအောင်လုပ်ရတယ်။ ဒါက အတိုက်အခံရဲ့ အလုပ်။ အတိုက်အခံက အစိုးရ၀န်ကြီးနဲ့ တွေ့ ပြီး သူတို့ အလုပ်ကို အောင်မြင်လာအောင် ကူညီနေတာကတော့ အင်မတန်မှားတယ်။
လက်ရှိအနေအထားမှာ ပြည်သူလူထုက မရဘူးတဲ့အခွင့်အရေးလေးရလာတော့ မပြရဲပြရဲနဲ့ ဆန္ဒတွေပြလာတာက အင်မတန်ကောင်းပါတယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို အသုံးချပြီး အစိုးရကို ဖြုတ်ချလို့ တောင် ရတယ်လို့ ထင်တယ်။ အယုံအကြည်မရှိတဲ့အဆိုကို ဆန္ဒပြတဲ့လူတွေပါးစပ်ထဲကိုသာထည့်
ပေးလိုက်နိုင်ရင် အရမ်းကောင်းမယ်။ အဓိကအစိုးရရဲ့ အရည်အချင်းမရှိတာကြောင့် အခုလိုဖြစ်နေတာပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးလည်းမဖြစ်စလောက်လုပ်တယ်။ အကျဉ်းသားဆိုလည်း မဖြစ်စလောက်လွှတ်တယ်။ အစိုးရအဖွဲ့ ထဲမှာလည်း လူလည်ကျပြီး အာဏာယူထားတယ်။ အရင်တုန်းကလူတွေကြီးပဲ။ ဒါ့ကြောင့် အစိုးရသက်တမ်းနှစ်နှစ်အတွင်းမှာ ဒေါ်စုကိုပဲ အပါချိုင်လိုက်နိုင်တာပဲ အဓိက အောင်မြင်မှု့ လို့ ပြောရမလိုဖြစ်နေပြီ။ ဒါ့ကြောင့် အတိုက်အခံတွေလည်း အတိုက်အခံမဟုတ်တော့ပဲ အကုန်ကုန်းခံတဲ့လူတွေလို ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။ ဦးသိန်းစိန်နာမည်ရလာတာပဲ အဖတ်တင်တယ်။
ဒီအတိုင်းသာဆက်ဖြစ်နေရင် ဒီအတိုင်းသာဆက်သွားနေရင် အချိန်ကာလတိုတိုအတွင်းမှာ လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင်ကိုမရောက်ပဲ လိပ်ကို ချိုင်းထောင့်တပ်သလိုဖြစ်နေမှာပဲ။ နဂိုကတည်းက နှေးနေပါတယ်ဆိုမှ အတိုက်အခံက မြန်လာအောင်တွန်းအားမပေးပဲ ချိုင်းထောင့်တပ်နေတယ်။ ဘယ်မှာလဲ ပေါ်လစီအမှားတွေကို ပါလီမန်ထဲမှာ ထောက်ပြပြီး ပြင်နိုင်ခဲ့လဲ။ ဘယ်မှာလည်း တစ်တိုင်းပြည်လုံးအပစ်ရပ်နိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးရခဲ့တာရှိလဲ။ ဦးအောင်မင်းလုပ်တာ အချိန်ကုန်တာပဲ အဖတ်တင်နေတယ်။ တယ်တမ်း ရိုးသားတယ်ဆိုရင် တစ်တိုင်းပြည်လုံးကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးသင့်တယ်။ အပစ်ရပ်သင့်တယ်။ ဒါပဲ ကြေငြာစရာရှိတာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ ဒါကိုတောင်မလုပ်နိုင်ပဲ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကို အတိုက်အခံတွေက တွန်းအားမပေးပဲ သူတို့ အလုပ်တွေကို ကူညီနေတာက ဘာနဲ့ တူသလဲဆိုရင် အစိုးရရဲ့ ဘောကို ၀ိုင်းပြီးမနေသလိုပဲ။ အားရပါးရ မ နေတယ်လိုပဲပြောချင်တယ်။
ပြည်ပ မီဒီယာကဆိုရင် ပိုလို့ တောင်ဆိုးသလားပဲ။ ဖေ့ဘွတ်စ်ပေါ်မှာ ၀န်ကြီး ၀န်လေးတွေကို ပြုံးပြပြီး အလွမ်းသည်နေသလားတောင် ထင်မိတယ်။ သိက္ခာမရှိတဲ့ လူတွေဘ၀ကို အလိုလိုရောက်သွားပြီ။
ကျနော်တို့ ဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာကို ကျနော်ပြောချင်တယ်။ ဒါကတော့ အစိုးရလုပ်ရမဲ့အလုပ်ကို ကျနော်တို့ ဘာမှ ကူညီပေးစရာမလိုဘူး။ သူ့ အလုပ်ကိုမှ သူနိုင်အောင်မလုပ်နိုင်တဲ့လူတွေကို ကျနော်တို့ ကအစိုးရအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုစရာ အကြောင်းကိုမရှိဘူး။ ကျနော်တို့ အလုပ်က တစ်ခုပဲရှိတယ်။ အခုဖြစ်နေတဲ့ မငြိမ်မသတ်မှု့ ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အစိုးရကို အယုံအကြည်မရှိ အဆိုဘက်ကိုသာလှည့်ပေးလိုက်ယုံပဲ။ ဘာမှ သွားပြီး နေရာတိုင်းမှာ ပွင့်လင်းလူ့ အဖွဲ့ အစည်းနဲ့ ကြည်နှုးနေစရာအကြောင်းကို မရှိဘူး။ တော်ဝင်နှင်းဆီမှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နှုးနေတာကိုလည်းရှောင်သင့်ပြီ။
အရင်တုန်းက ကျနော်ပြောဘူးတယ်။ ဒါကတော့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ ဒီအတိုင်းပဲ ဆက်ရွေ့ ပါ။ ကျနော်တို့ ပါတီစီပေးရှင်းလုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောဘူးတယ်။ ဒီပုံစံကိုထောက်ခံတယ်လို့ ပြောဘူးတယ်။ ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ထောက်ခံတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲ ရှိပါတယ်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်ပြောတိုင်း ခေါင်းငြိမ့်တဲ့လူစားမျိုးတွေတော့ မဖြစ်ဖို့ လိုတယ်။ ဒေါ်စုက သူ့ အလုပ်ကို သူလုပ်နေတယ်။ သူပြောတိုင်း ဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကတော့ မကောင်းဘူးပေါ့။ အခုအတိုက်အခံတွေအားလုံးက အဲဒိအတိုင်းဖြစ်နေလို့အခုလိုပြောနေရတာပါ။
ရေးသားသူ - ---- at Wednesday, June 06, 2012
ကျနော် အခုနေတဲ့နေရာမှာ ငပိရည်ဝယ်လို့ မရဘူး။ မျှစ်ပြုတ်နဲ့ ဗဒတ်စာ မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျနော် နေတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ငွေ ရလို့ ပဲ။
ငံပြာရည်စားချင်လို့လေးနာရီလောက် မောင်းရတဲ့ ကာကူးလီဆိုတဲ့ မြို့ ကိုသွားရတယ်။ စားချင်တဲ့အတွက် ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ တော့ မသတ်မှတ်ဘူး။
ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ မွန်နယ်စပ်မှာနေတုန်းက အ၀တ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုပဲရှိတယ်။ ပျော်တယ်။ စိတ်မညစ်ဘူး။ မှုးတဲ့လူကလွဲရင်ပေါ့။
ဘ၀တွေမျိူးစုံမှာ ဒုက္ခမျိုးစုံကို ခံစားဘူးတော့ အခုရတဲ့ဘ၀ကို ပျားရည်လို့ တော့မထင်ပါဘူး။ နေနိုင်ပါတယ်။
ကျနော့်နားမှာ ဗမာမရှိဘူး။ ဗမာအစားအစာ ငပိမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရအောင် ဖန်တီးတယ်။ ဘယ်လို ရမလဲဆိုတာ စဉ်းစားတယ်။
ငပိဟာ ကျနော့်အသက်။ ငပိဟာ ကျနော့်ဘ၀။ ကျနော် ဒါတွေမရှိပဲ အသက်မရှင်နိုင်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ငပိစားပြီး အသက်ကြီးလာလို့ ပဲ။
ရေးသားသူ - ---- at Tuesday, June 05, 2012
From Kyaw Hlaing Win
ရေးသားသူ - ---- at Monday, June 04, 2012
Thanks for visiting my controversal blog. I am unable to write anything at this time because I do not have Internet at my new house in leinster in western australia. This issue will be solved inamonth. Sorry for your articles you sent to me. I will post them as soon as I have Internet. By the way, I miss all of you. Cheers.
ရေးသားသူ - ---- at Sunday, June 03, 2012